INONA NO ATAO HOE DRIVE-STATE DRIVE (SSD)? FAMARITANA SSD - MALEMY
Eo am-pividianana solosaina finday vaovao dia mety ho nahita olona niady hevitra ianao raha toa ka tsara kokoa ny fitaovana misy HDD na iray amin'ny SSD. Inona ny HDD eto? Fantatsika rehetra ny kapila kapila. Izy io dia fitaovana fitehirizana faobe ampiasaina matetika amin'ny PC, solosaina finday. Mitahiry ny rafitra fandidiana sy ny programa fampiharana hafa. Ny kapila SSD na Solid-State dia safidy vaovao kokoa ho an'ny Hard Disk Drive nentim-paharazana. Niditra an-tsena tato ho ato izy fa tsy ny kapila, izay no fitaovana fitehirizana faobe efa an-taonany maro.
Na dia mitovy amin'ny an'ny kapila mafy aza ny asany, dia tsy miorina toy ny HDD na miasa toa azy ireo. Ireo fahasamihafana ireo dia mampiavaka ny SSD ary manome tombony kely an'ilay fitaovana amin'ny kapila mafy. Ampahafantaro anay bebe kokoa momba ny Solid-State Drives, ny rafitr'izy ireo, ny asany ary ny maro hafa.
SSDs - tantara fohy
Ahoana no fiasan'ny Solid State Drives?
Fa maninona no ampiasaina ny SSD?
Azo ampiasaina amin'ny PC rehetra ve ny SSD?
Fantatsika fa ny fahatsiarovana dia mety misy karazany roa - miovaova sy tsy miovaova . Ny SSD dia fitaovana fitehirizana tsy miovaova. Midika izany fa ny angona voatahiry ao amin'ny SSD dia mijanona na dia ajanona aza ny herinaratra. Noho ny rafitr'izy ireo (izy ireo dia mpamorona flash sy chip flash memory NAND), ny drive-state solid dia antsoina koa hoe flash drive na kapila solid-state.
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny mpilalao media Windows
Hard disk drive dia nampiasaina ho fitaovana fitehirizana nandritra ny taona maro. Mbola miasa amin'ny fitaovana amin'ny kapila mafy ny olona. Ka inona no nanosika ny olona hikaroka fitaovana fitehirizana faobe hafa? Ahoana no nahatonga ny SSD? Andeha isika hijery topy kely amin'ny tantara hahafantarana ny antony manosika ny SSD.
Tamin'ny taona 1950, nisy teknolojia 2 nampiasaina nitovy tamin'ny fomba fiasan'ny SSD, dia ny fahatsiarovan-tena sy ny foibeny ary ny fivarotana famakiana karatra-capacitor ihany. Na izany aza, vetivety dia nanjary hadinon'izy ireo izy ireo noho ny fisian'ny fitaovana fitahirizana amponga mora vidy kokoa.
Ny orinasa toa an'i IBM dia nampiasa SSD tamin'ny solosaina finday voalohany. Na izany aza, ny SSD dia tsy nampiasaina matetika satria lafo. Taty aoriana, tamin'ny taona 1970, fitaovana iray antsoina hoe Electrically Alterable efitra dia nataon'i General Instruments. Ity koa, tsy naharitra. Noho ny olana maharitra dia tsy nahazo laza ity fitaovana ity.
Tamin'ny taona 1978, ny SSD voalohany dia nampiasaina tamin'ny orinasan-tsolika hahazoana angon-drakitra fampandrenesana. Tamin'ny 1979, ny orinasa StorageTek dia namolavola ny RAM SSD voalohany indrindra.
ram SSDs mifototra dia nampiasaina nandritra ny fotoana ela. Na dia haingana kokoa aza izy ireo dia nandany loharanom-pahalalana CPU bebe kokoa ary lafo be. Tany am-piandohan'ny 1995 dia novolavolaina ireo SSD mifototra amin'ny flash. Hatramin'ny fampidirana ireo SSD miorina amin'ny flash, fampiharana indostrialy sasany izay mitaky miavaka MTBF (midika fotoana eo anelanelan'ny tsy fahombiazana) nomariho, nosoloina HDD tamin'ny SSD. Ny kapila mafy orina dia mahazaka ny hatairana, ny hovitrovitra, ny fiovan'ny maripana. Afaka manohana ny antonony izy ireo Tahan'ny MTBF.
Ny SSDs dia natsangana tamin'ny alàlan'ny fametahana ireo trondro fahatsiarovana mifampitohy ao anaty vongana. Ny sombin-kazo dia vita amin'ny silikone. Ny isan'ny sombin-tsolika ao anaty stack dia ovaina mba hahatratrarana ny hateviny. Avy eo, izy ireo dia manana transistors amin'ny vavahady mitsingevana mba hitàna fiampangana. Noho izany, ny angon-drakitra voatahiry dia tazonina ao amin'ny SSDs na dia tafasaraka amin'ny loharano herinaratra aza izy ireo.
Ny SSD rehetra dia mety manana ny iray amin'ireo karazana fahatsiarovana telo - sela tokana, ambaratonga maro na ambaratonga telo.
1. Sela tokana ambaratonga no sela haingana indrindra sy mateza indrindra. Noho izany, izy ireo ihany koa no lafo indrindra. Ireo dia natsangana hitazona data kely na kely aza amin'ny fotoana rehetra.
2. Sela marobe dia mahazaka data roa. Ho an'ny habaka nomena dia afaka mihazona angona betsaka kokoa noho ny sela tsy misy afa-tsy izy ireo. Na izany aza, manana fatiantoka izy ireo - miadana ny hafainganan'izy ireo manoratra.
windows 10 fanalahidy fanombohana hadisoana
3. Sela ambaratonga telo no mora indrindra amin'ny antsapaka. Tsy dia mateza izy ireo. Ireo sela ireo dia afaka mitazona data bitika 3 ao anaty sela iray. Ny hafainganam-pandehan'izy ireo manoratra no haingana indrindra.
Hard Disk Drives no fitaovana fitahirizana default ho an'ny rafitra, efa elaela izay. Noho izany, raha miova mankany amin'ny SSD ny orinasa dia mety misy antony marim-pototra. Andeha hojerentsika izao ny antony itiavan'ny orinasa sasany ny SSD amin'ny vokatra vokariny.
Ao amin'ny HDD nentim-paharazana dia manana motera ianao hanodinana ny lovia, ary hihetsika ny loha R / W. Ao amin'ny SSD, ny fitehirizana dia karakarain'ny chip fahatsiarovana flash. Araka izany, tsy misy faritra mihetsika. izany manatsara ny faharetan'ilay fitaovana.
Ao amin'ny solosaina finday misy kapila mafy, ny fitaovana fitahirizana dia handany hery bebe kokoa hanodinana ny lovia. Satria tsy misy faritra mihetsika ny SSD, ny solosaina finday misy SSDs dia mandany angovo kely kokoa. Raha miasa ny orinasa amin'ny fananganana HDD hybrid izay mandany herinaratra kely kokoa rehefa mihodina, ireo fitaovana hybrid ireo angamba handany herinaratra bebe kokoa noho ny kapila mangarahara.
Toa tsy misy fizarana mihetsiketsika miaraka amin'ny tombony be dia be. Averina indray, ny tsy fananana lovia mihodina na ny lohan'ny R / W dia midika fa azo vakiana eo no ho eo ny data. Miaraka amin'ny SSDs, mihena be ny latency. Noho izany, ny rafitra misy SSD dia afaka miasa haingana kokoa.
Recommended: Inona ny Microsoft Word?
HDD mila karakaraina tsara. Rehefa manana faritra mihetsiketsika izy ireo dia marefo sy marefo. Indraindray, na dia ny hovitrovitra kely avy aza mitete dia mety hanimba ny HDD . Saingy ny SSD dia manana ny tampony eto. Afaka mahazaka fiatraikany tsara kokoa noho ny HDD izy ireo. Na izany aza, satria manana andiam-panoratana voafetra izy ireo dia manana androm-piainany maharitra. Lasa tsy azo ampiasaina intsony izy ireo rehefa lany ny tsingerin'ny fanoratana.
Ny sasany amin'ireo fiasa amin'ny SSD dia misy fiantraikany amin'ny karazany. Amin'ity fizarana ity dia hodinihintsika ny karazana SSD.
1. 2.5 - Raha ampitahaina amin'ireo SSD rehetra ao anaty lisitra dia ity no miadana indrindra. Fa mbola haingana kokoa noho HDD. Ity karazana ity dia misy amin'ny vidiny tsara indrindra isaky ny GB. Io no karazana SSD mahazatra indrindra ampiasaina ankehitriny.
2. mSATA - m midika ho mini. mSATA SSDs dia haingana kokoa noho ny 2.5. Aleo izy ireo amin'ny fitaovana (toy ny solosaina finday sy kahie) izay tsy lafo vidy ny habakabaka. Manana anton-javatra kely izy ireo. Raha mihidy ny board circuit ao amin'ny 2.5 dia miboridana ireo ao amin'ny SSD mSATA. Tsy mitovy ihany koa ny karazana fifandraisan'izy ireo.
3. SATA III - Izy io dia manana fifandraisana izay mifanaraka amin'ny SSD sy HDD. Nanjary nalaza io rehefa nanomboka nifindra tamin'ny SSD avy amin'ny HDD ny olona. Hafaingam-pandeha 550 MBps izy io. Ny kapila dia mifandray amin'ny motherboard amin'ny alàlan'ny tadiny antsoina hoe tariby SATA ka mety somary mikorontana.
Efatra. PCIe - PCIe dia mijoro ho an'ny Peripheral Component Interconnect Express. Io no anarana nomena ilay slot izay mazàna dia mitahiry karatra sary, karatra feo, sy ny toy izany. PCIe SSDs mampiasa an'ity slot ity. Ireo no haingana indrindra amin'ny natiora rehetra, lafo koa. Izy ireo dia afaka mahatratra ny hafainganam-pandeha izay efa ho avo efatra heny noho ny an'ny a SATA fiara .
5. M.2 - Toy ny mSATA drive, manana takelaka boribory tsy misy fangarony izy ireo. Ny kapila M.2 no kely indrindra amin'ny karazany SSD. Mandainga tsara amin'ireo motherboard ireo. Manana pin mpampitohy kely izy ireo ary manana toerana kely dia kely. Noho ny haben'ny habeny dia afaka mihamafana haingana izy ireo, indrindra rehefa avo ny hafainganana. Noho izany, tonga miaraka amina heatsink / heat spreader ao anaty izy ireo. Ny M.2 SSDs dia misy amin'ny SATA na Karazana PCIe . Noho izany, ny kapila M.2 dia mety ho samy hafa habe sy hafainganam-pandeha. Na dia tsy afaka manohana NVMe aza ny mSATA sy ny kapila 2.5 (izay ho hitantsika manaraka), ny kapila M.2 dia afaka.
6. NVMe - NVMe no mijoro Fahatsiarovana tsy miovaova . Ny andianteny dia manondro ny interface amin'ny alàlan'ny SSD toy ny angona fifanakalozana PCI Express sy M.2 miaraka amin'ny mpampiantrano. Miaraka amin'ny interface NVMe, afaka mahatratra hafainganam-pandeha avo lenta ny olona.
Raha manana be dia be ny SSD, nahoana no tsy nosoloin'izy ireo tanteraka ny HDD ho fitaovana fitehirizana lehibe? Mpanakana iray manan-danja amin'izany ny vidiny. Na dia ambany noho ny teo aza ny vidin'ny SSD ankehitriny, raha niditra tao amin'ny tsena izy, HDDs ihany no safidy mora vidy kokoa . Raha ampitahaina amin'ny vidin'ny kapila mafy, ny SSD dia mety handany efa ho intelo na avo efatra heny. Ary koa, rehefa mampitombo ny fahaizan'ny fiara ianao dia miakatra haingana ny vidiny. Noho izany, mbola tsy nanjary safidy azo atao ara-bola ho an'ny rafitra rehetra izy io.
Vakio ihany koa: Zahao raha SSD na HDD ny Drive misy anao amin'ny Windows 10
Antony iray hafa mahatonga ny SSD tsy nanolo tanteraka ny HDD dia ny fahaiza-manao. Ny rafitra mahazatra misy SSD dia mety hanana fahefana amin'ny elanelam-potoana 512GB ka hatramin'ny 1TB. Na izany aza, efa manana rafitra HDD misy tahiry terabytes maromaro izahay. Noho izany, ho an'ireo olona mijery fahaiza-manao lehibe, ny HDD dia mbola ny safidiny ihany.
Hitanay ny tantara ao ambadiky ny fivoaran'ny SSD, ny fomba fananganana SSD, ny tombontsoa omeny, ary ny antony tsy mbola nampiasana azy amin'ny PC / solosaina finday rehetra. Na izany aza, ny fanavaozana rehetra amin'ny haitao dia misy ny fihoaram-pefy. Inona avy ireo fatiantoka ateraky ny fitondrana fanjakana mafy orina?
1. Manoratra haingana - Noho ny tsy fisian'ny faritra mihetsiketsika dia afaka miditra amin'ny data eo noho eo ny SSD. Na izany aza, ny latency ihany no ambany. Rehefa tsy maintsy soratana ao anaty kapila ny angona dia mila esorina aloha ny angona taloha. Noho izany, miadana ny asan'ny fanoratana amin'ny SSD. Ny fahasamihafana eo amin'ny hafainganana dia mety tsy ho hitan'ny mpampiasa antonony. Saingy tena fatiantoka izany raha te-hamindra angona tahiry be ianao.
2. Ny fahaverezan'ny data sy ny fanarenana - Ny data voafafa amin'ny kapila fanjakana solid dia very mandrakizay. Satria tsy misy kopian'ny angon-drakitra voaorina, fatiantoka lehibe io. Ny fatiantoka maharitra ny angon-drakitra mora tohina dia mety ho zavatra mampidi-doza. Noho izany, ny zava-misy fa tsy afaka mamerina angon-drakitra very amin'ny SSD dia famerana iray hafa eto.
3. Vidiny - Mety ho fetra vetivety izany. Koa satria ny SSD dia teknolojia somary vaovao kokoa, voajanahary ihany fa lafo noho ny HDD nentim-paharazana izy ireo. Hitanay fa nihena ny vidiny. Angamba ao anatin'ny roa taona, ny vola lany dia tsy hijanona ho an'ny olona hifindra amin'ny SSD.
Efatra. Faharetana - Fantatsika izao fa ny angona dia nosoratana tamin'ny kapila tamin'ny famafana ireo data taloha. Ny SSD rehetra dia manana andiam-panoratana / mamafa famafana. Noho izany, rehefa akaikin'ny fetra fanoratana / mamafa ny tsingerina ianao, dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny SSD. Ny salan'isa SSD dia misy tsingerina manoratra / mamafa 1.00.000 eo ho eo. Io isa voafetra io dia manafoana ny androm-piainan'ny SSD.
5. Fitehirizana - Toy ny vidiny, io dia mety ho fetra mandalo ihany. Hatramin'izao, ny SSD dia tsy misy afa-tsy amin'ny fahaiza-manao kely. Ho an'ny SSD manana fahaiza-manao ambony dia tsy maintsy mamoaka vola be ny olona. Ny fotoana ihany no hilazana raha afaka manana SSD mora vidy amin'ny fahaiza-manao tsara isika.
nisy lesoka directx nahafaty nitranga ffxiv
windows 10 miala amin'ny wifi
setup ftp mpizara Windows 10
Google chrome audio tsy mandeha
Windows vaovao tsy mandeha ny windows
rafitra sy fampiasa fahatsiarovana voafehy
Ny fifandraisana eo an-toerana windows 7 dia tsy manana fikirakira ip mety